Ngwa kachasị mma 6 iji mụta asụsụ Portuguese | Androidsis
Ngwa kachasị mma 6 iji mụta asụsụ Portuguese
Nerea Pereira | | Ngwa gam akporo
Asụsụ dị ezigbo mkpa inwe ike ime njem ebe ọ bụla ma nwee ike ikwurịta okwu n'enweghị nsogbu. Otu n'ime asụsụ kacha adọta mmasị bụ Portuguese Ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị ịmụ asụsụ ahụ, ị ​​nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwa ga -enyere gị aka n'ịmụ ihe.
Agbanyeghị na a bịa n'ịmụ asụsụ, nhọrọ kacha mma bụ ịga obodo oge niile ịmụ asụsụ ngwa ngwa ma tinye ya na ndị ahụ. Mana anyị maara na ọ bụ nhọrọ dị mgbagwoju anya maka ọtụtụ mmadụ. Ya mere, teknụzụ nwere ike bụrụ ezigbo enyi gị mgbe ị na -eji ya ngwa ịmụta Portuguese ma mee ya mgbe ị nwere oge na -akwụghị ụgwọ ọ bụla. Taa, anyị na -egosi gị ụfọdụ ngwa kacha mma maka ya.
1 Ngwa dị mkpa iji mụta asụsụ Portuguese
Ngwa dị mkpa iji mụta asụsụ Portuguese
Ndị a bụ ngwa kachasị mma maka ịmụ asụsụ Portuguese, nke ọ bụla dị iche ma nwee mmụta dị iche na ha niile ahaziri dịka onye ọrụ ọ bụla siri dị. Ma ọ bụ na ịmụ ihe na ịpị na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba bụ nhọrọ zuru oke iji mee ebe ọ bụla n'oge efu ọ bụla ị nwere, n'agbanyeghị ma ị nwere njikọ ịntanetị.
Yabụ, n'atụghị egwu, anyị na -ahapụrụ gị ihe anyị weere na ọ bụ ngwa kacha mma iji mụta asụsụ Portuguese site na ekwentị mkpanaaka nwere nsonaazụ kacha mma.
Anyị na -amalite site na otu ngwa kachasị mma nke ga -enyere gị aka ịmụ asụsụ Portuguese na nke zuru oke. Usoro mmụta na Duolingo bụ site na imeri ọkwa na irite mkpụrụ ego ga -enyere gị aka imepe mmega ahụ na mmemme ndị ọzọ. Ị nwere ike họrọ atụmatụ ọmụmụ ịchọrọ n'etiti nkeji 5 ma ọ bụ 20. Ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ bụ otu n'ime ngwa kachasị mma ebe ọ na -enyere gị aka ịmụ asụsụ ahụ site na nghọta nghọta, mkparịta ụka, ịgụ ihe, itinye ụtọ asụsụ na okwu.
Na ịtụle ihe ọtụtụ asụsụ dị na Duolingo, Eziokwu bụ na nke a bụ otu n'ime ngwa kachasị mma maka ịmụ asụsụ, ma ọ bụ Portuguese ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ dị na ngwa a siri ike.
Anyị na-aga n'ihu na Busuu ngwa yiri Duolingo mana nke ahụ gụnyere ọrụ na -atọ ụtọ ịmụta ngwa ngwa. Ebumnuche bụ inyere gị aka ịmata echiche ndị bụ isi, okwu okwu, ahịrịokwu ndị kachasị mkpa maka mkparịta ụka ma mara ụtọ asụsụ.
Usoro ọmụmụ ya bụ site na ọdịyo, mmega ahụ, ihe ịma aka mkpoputa na egwuregwu iji tinye ihe niile ị na -amụta site na otu na ntanetị na n'ịntanetị.. Ị nwekwara nhọrọ ịhụ ka ị ga -esi mara ihe niile ị mụtara na mkparịta ụka gị na ndị na -asụ asụsụ kwa ụbọchị iji mee ka asụsụ ahụ zuo oke yana ụda olu.
Obi abụọ adịghị ya na nhọrọ ọzọ dị mma ịtụle, ọkachasị n'ihi na ọ nwere ike ịrụ ọrụ na -anọghị n'ịntanetị, yabụ na ọ zuru oke maka mụta asụsụ Portuguese site na mkpanaka gị mgbe ị na -eme njem.
Busuu: Mụta Bekee
Ngwa ọzọ kachasị mma iji mụta asụsụ Portuguese bụ HelloTalk. Ngwa a na -enye gị ohere gwa ndị na -asụ asụsụ si Brazil na Portugal ka ha nyere gị aka melite ma nụchaa akpaala okwu. HelloTalk ga -enye gị ohere ịkpọ oku na -akwụghị ụgwọ maka mmadụ n'otu n'otu kamakwa ịjikọ ọdịyo na vidiyo, zipu ozi na ozi olu ma ọ bụ tụgharịa nkebi ahịrịokwu na ederede iji mụta ọtụtụ asụsụ.
Ọ bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ bụ ezigbo ngwa ga -enyere gị aka ịmụta olumba na ngosipụta n'ụzọ nke ikwu ụdị asụsụ ahụ na ndị ezigbo mmadụ ga -enyere gị aka na ahụmịhe asụsụ ahụ.
HelloTalk - Mụta asụsụ
Developer: HelloTalk Mụta Asụsụ Ngwa
Anyị na -aga n'ihu na ngwa ọzọ dị mma iji mụta asụsụ Portuguese na ọtụtụ asụsụ nke bụkwa otu n'ime zuru oke ma dịkwa mfe iji kwa ụbọchị. Ị nwere ike mụta iwu okwu na ụtọ asụsụ yana meziwanye ịkpọpụta asụsụ ahụ site na usoro ndị ọkachamara ọkachamara asụsụ mepụtara.
Buru n’uche na ọ bụ ngwa efu na -enye gị ohere ibudata nkuzi nke nkuzi ọ bụla, mana ọ bụrụ n’ịchọrọ ịnweta katalọgụ ọkwa zuru ezu, ị ga -akwụ ụgwọ ndenye aha kwa ọnwa.Ndenye aha a ga -enye gị ohere ịnweta ihe karịrị ọmụmụ 5.000 yana ihe karịrị asụsụ 14 iji mụta ebe ọ bụla na oge ọ bụla ịchọrọ. Ọ bụ ezigbo nhọrọ ịmụ asụsụ dị mfe yana ị nwere ike ịkwado ndị enyi ma ọ bụ ezinụlọ.
Ekwela ka a ghọgbuo gị site na mgbasa ozi gabigara ókè nke ngwa a kwụrụ ka ọ pụta n'ụdị mgbasa ozi niile. Ọ bụ n'ezie ọrụ na -arụ ọrụ nke ọma yabụ na ọ bara uru ịnwale. N'iburu n'uche ọkwa dị oke mma o nwere na ụlọ ahịa ngwa Google, o doro anya na ọ bụ otu n'ime ngwa kachasị mma iji mụta asụsụ Portuguese site na ekwentị mkpanaaka gị.
Babbel: Mụta asụsụ
Ngwa ọzọ yiri nke gara aga bụ Tandem, nke na -enye gị ohere ka gị na ndị obodo nke obodo ịchọrọ ịsụ asụsụ nke gị na ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ akparịta ụka. Naanị ị ga -edebanye aha na ngwa ahụ, ndị mmadụ ga -apụta na ị nwere ike ịgbaso yana onye chọrọ ịmụ asụsụ gị ka ị nwee ike nyere ibe gị aka ịmụta asụsụ na ihe ọmụma gbasara ya.
Ngwa a nwere sistemụ na -edozi njehie ụtọ asụsụ niile ị nwere wee mụta ihe kpatara na ọ dị njọ yana nyere aka ka enwe ezigbo nkwukọrịta n'etiti ha abụọ. Ọ na -enye gị ohere ịkpọ ndị ọrụ oku vidiyo ma ọ bụ ụdị pro ị nwere ike ịkparịta ụka n'onwe gị ma ọ bụrụ na ị na -eche ịga obodo n'oge na -adịghị anya iji nweta ndụmọdụ na ọtụtụ okwu nke asụsụ ahụ.
Tandem: mgbanwe asụsụ
Developer: Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Tripod Technology GmbH
Memrise bụ ngwa na -achọsi ike nke ga -enyere gị aka iburu echiche na okwu site na onyonyo ma ọ bụ vidiyo n'otu isiokwu.
Dịka ị nwere ike iche n'echiche, emebere ya maka ndị chọrọ ịmụtakwu okwu gbasara asụsụ ebe ọ bụ na ha enweela isi. Uru ya bụ na ọ bụ ndị na -asụ asụsụ nke ezigbo asụsụ mere vidiyo ndị a ka ọ dịrị ha mfe ịmụta asụsụ ahụ.
Memrise: Mụta Bekee
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwa kachasị mma 6 iji mụta asụsụ Portuguese
Smartflix anaghị arụ ọrụ: Nhọrọ kacha mma